Ukudibanisa iSamrai Women's History of Asia
Umlando Omdala wamaJarimakazi aseJapan aMaqhawe
Kwakudala ngaphambi kokuba igama elithi " samamurai " lisetyenziswe, abaqhawe baseJapan babenekhono ngekrele nangomkhonto. Laba balwa baquka abafazi abathile, njengengqungquthela ye-Empress Jingu - abahlala phakathi kwe-169 no-269 AD
Iingcali zokucwangcisa ulwimi zibonisa ukuba igama elithi "Samurai" ligama lomntu; Ngaloo ndlela, akukho "i-Samuraikazikazi". Nangona kunjalo, ngamawaka eminyaka, abanye abafazi baseJapan abaphezulu baphunzile izakhono zokulwa kunye nokuthatha inxaxheba kwimfazwe ngokufanelekileyo kwimiba yamaSamamu.
Phakathi kwekhulu le-12 nele-19, amaninzi amabhinqa eklasi yama-Samurai afunde indlela yokusingatha ikrele kunye ne-naginata-ityala kumsebenzi omde-ngokuyinhloko ukuzikhusela kunye namakhaya abo. Kwimeko apho isigodlo sawo sagqitywa ngabalweli beentshaba, abafazi babelindele ukuba balwe kuze kube sekupheleni baze bafe kunye nodumo, izixhobo ngesandla.
Amanye amabhinqa amakhwenkwe ayenamaqhawe anamandla abaya ekulweni kunye namadoda, kunokuhlala ekhaya aze alinde imfazwe. Nazi imifanekiso yezinye ezidumileyo phakathi kwazo.
I-Faux Samurai Abafazi Nge-Genpei War Era
Ukuprintwa kukaMinamoto Yoshitsune, egqoke iimpahla zowesifazane kodwa ezemidlalo zinkwenkwezi ezimbini ze-Samurai, emi ngasecaleni lokulwa nomloki uSaito Benkei. Iqoqo leThala leeNcwadi zoLungiso
Ezinye iziboniso zento ebonakala ngathi yi-samamura ibhinqa ngokwenene imifanekiso yamadoda amahle, afana nale ngqangi yase-Kiyonaga Torii ecinga ukuba yenziwe phakathi kuka-1785 ukuya ku-1789.
"Inenekazi" eboniswe apha ifake isambatho eside kunye nesigqoko somntu phezu kweenqwelo zokulwa. Ngokutsho kukaDkt. Roberta Strippoli weYunivesithi yaseBinghamton, nangona kunjalo, le nto ayiyindodakazi kodwa i-Samurai yindoda enhle kakhulu i-Minamoto Yoshitsune.
Indoda ecaleni kwayo iguqa ukuguqula isicathulo sayo yindoda engummangaliso uSaito Musashibo Benkei - owayehlala ngo-1155 ukuya ku-1189 kwaye ubizwa ngokuba ngumntu onesiqingatha-somntu, umzali wesigqirha kunye nezinto ezintle kakhulu, kunye nobuchule bakhe umkhosi.
U-Yoshitsune wanqoba uBenkei ngokulwa ngesandla, emva koko baba ngabahlobo abaqinileyo kunye nabadibeneyo. Aba babini bafa kunye kunye neNgqungquthela yaseKoromogawa ngo-1189.
UTomoe Gozen: I-Samuraikazi eLaziwayo kakhulu
UTomoe Gozen (1157-1247), ama-Samurai yama-Warpe yamaxesha emfazwe, encike kwisixhobo sakhe sepolisi. Iqoqo leThala leeNcwadi zoLungiso
Ngexesha leMfazwe yaseGenpei ukususela ngo-1180 ukuya ku-1185, intombazana enhle egama linguTomoe Gozen walwa kunye ne-daimyo kunye nendoda enokwenzeka uMinamoto no-Yoshinaka ngokumelene neTaira kwaye kamva imikhosi yomzala wakhe, iMinamoto noYoritomo.
UTomoe Gozen ("gozen" yintsikelelo echaza "intombikazi") yayidume njengowomkhontokazi, umkhwele onomsebenzi, kunye nomculi omkhulu. Wayengumphathi wokuqala ka-Minamoto waza wathatha ubuncinane intloko enye intshaba ngexesha le-Battle of Awazu ngo-1184.
Ixesha elide-i-Heian i-Genpei Imfazwe yintlankqalazo yoluntu phakathi kwamaqela ama-Samurai ama-Samurai kunye ne-Taira. Ezi ntsapho zifuna ukulawula i-shogunate. Ekugqibeleni, indlu yaseMinamoto yahlala kwaye yazinzisa i-shogunate yaseKamakura ngo-1192.
I-Minamoto ayizange nje ilwe neTaira, nangona kunjalo. Njengoko kuchaziwe ngasentla, amakhosi amancinane aseMinamoto aphinde alwa. Ngelishwa kuTomoe Gozen, u-Minamoto no-Yoshinaka bafa kwi-Battle of Awazu. Umzala wakhe, uMinamoto Yoritomo, waba ngu- shogun .
Iingxelo ziyahluka ngohlobo lweTomoe Gozen. Abanye bathi wahlala ekulweni waza wafa. Abanye bathi wayehamba ephethe intloko yentshaba, kwaye yaphela. Sekunjalo, abanye bathi batshatile uWada Yoshimori waza waba ngununu emva kokufa kwakhe.
Tomoe Gozen ngeHarryback
Umdlali obonisa umdlalo waseJapane ohloniphekileyo waseJapan, uTomoe Gozen. Iqoqo leThala leeNcwadi zoLungiso
Ibali likaTomoe Gozen liphefumlele abaculi kunye nabalobi ngeenkulungwane.
Olu shicilelo lubonisa umdlali kumdlalo wekabuki wenkulungwane ye-19 ekubonakalisa i-Samurai yamaqhawe eyaziwayo. Igama kunye nomfanekiso wakhe uye wabamba umdlalo we-NHK (waseJapan) obizwa ngokuba ngu "Yoshitsune," kunye neencwadi zee-comic, amanoveli, imidlalo ye-anime kunye nevidiyo.
Ngethamsanqa kuthi, waphinda waphefumlela inani labakhweli beprint be-printcut beJapan. Ngenxa yokuba ayikho imifanekiso yimihla yokuphila kwayo, ama-artists anenkululeko yokuzichazela iimpawu zakhe. Inye yedwa ichazwa ngaye, evela "kwiTale yeHeike," ithi wayelungileyo, "enekhanda elimhlophe, iinwele ezinde, kunye neempawu ezithandekayo." Kulungile, h?
UTomoe Gozen Uyabhubhisa Omnye Umkhosi
AmaSamamu amantombazana uTomoe Gozen uyaphazamisa inqwelwe yindoda. Iqoqo leThala leeNcwadi zoLungiso
Le nguqulelo enhle kaTomoe Gozen ibonisa ukuba ngu-thixokazi, kunye neenwele zakhe ezide kunye nomgubo we-silk ehamba emva kwakhe. Lapha uboniswa ngamacwe eesifazana abafazi bexesha likaHeian apho i-intanethi yendalo ihlanjululwa kwaye i-bushier ibe yicwecwe ephezulu ebunzini, kufuphi neenwele.
Kulo mzobo, uTomoe Gozen uxhasa umchasi wakhe wekrele elide ( katana ), eliwele phantsi. Unengalo yakhe yesobunxele kwi-firm holding kwaye mhlawumbi unokufuna ukubamba intloko yakhe.
Oku kubambelela kwimbali njengoko wayaziwa ngokuba yiComoto ngaphandle kweMoroshige ngexesha le-1184 iMfazwe yaseArazu.
Tomoe Gozen Ukudlala iKoto kunye nokuHwela iMfazwe
UTomoe Gozen, c. 1157-1247, edlala i koto (phezulu) kwaye ekhwela emfazweni (ezantsi). Iqoqo leThala leeNcwadi zoLungiso
Lo mbhalo othakazelisayo kakhulu ukususela ngo-1888 ubonisa uTomoe Gozen kwiphaneli elingaphezulu kwendima yemveli yowesifazane - ehleli phantsi, iinwele zakhe ezinde zihamba, zidlala i koto . Kwinqanaba elingaphantsi, ke, unenwele yakhe enamandla kwaye udayise ingubo yakhe yengubo ye-armor kwaye usebenzise i-naginata kunokukhetha i-koto.
Kuzo zombini iipaneli, abagibeli besilisa abaneenkwenkwezi bavela kwimvelaphi. Akucaci ukuba ngaba ngabadibene naye okanye iintshaba, kodwa kuzo zombini imeko, ukhangele phezu kwehlombe lakhe.
Mhlawumbi uhlalutyo lwamalungelo amabhinqa kunye neengxaki zexesha-zombini ukubonakaliswa kwi-1100s kwaye xa ukuprintwa kwenziwa ngasekupheleni kweminyaka ye-1800 - kugxininisa ukusoloko kwesongelo samadoda kumandla amabhinqa nokuzimela.
I-Hangaku Gozen: Uthando oluthandwayo lweNkundla yeGenpei
I-Hangaku Gozen, elinye i-Genpei yamaxesha emfazwe yamaSamamu, ayenxulumene neT Taira Clan, c. 1200. Iqoqo leThala leeNcwadi zoLondolozo lweCongress.
Omnye umfazi owayo owaziwayo we-Genpei War kwaba ngu-Hangaku Gozen, owaziwa nangokuthi yi-Itagaki. Nangona kunjalo, wayedlelane nomndeni wakwaTayra olahlekelwe yimfazwe.
Kamva, u-Hangaku Gozen kunye nomntakwabo, uJo Sukemori, bajoyina kwiKennin Uprising ye-1201 eyazama ukuphanga i-Kamakura Shogunate entsha. Wadala umkhosi waza wahola eli liqela lamajoni ama-3 000 ekukhuseleni i-Fort Torisakayama ngokumelene nomkhosi ohlasela abantu baseKamakura abangama-10,000 okanye ngaphezulu.
Umkhosi weHangaku wanikezelwa emva kokuba wenzakele ngcitshulwa, kwaye emva koko wabanjwa waza wathathwa kwi-shogun njengobanjwa. Nangona i-shogun yayingamyalela ukuba enze i-seppuku, elinye lamasosha aseMinamoto lathandana nabathunjiweyo kwaye yanikwa imvume yokutshata naye esikhundleni. UHangaku nomyeni wakhe u-Asari uJoshito babenomnye intombi kunye kunye baphila ubomi obunokuthula emva koko.
Yamakawa Futaba: Intombi yeShogunate kunye neNkwenkwekazikazi
Yamakawa Futaba (1844-1909), owalwela ukukhusela iTransga Castle kwiBarhin War (1868-69). ngokusebenzisa i-Wikipedia, ummandla woluntu ngenxa yobudala.
Imfazwe yaseGenpei ekupheleni kwekhulu le-12 ibonakala ibakhuthaza amaninzi amabhinqa amabhinqa ukuba ajoyine kule mpi. Ngoku kutshanje, iMfazwe yaseBoshin ka-1868 no-1869 nayo yayibonisa umoya wokulwa wabasetyhini baseJapan abafazi.
Imfazwe yaseBoshin yenye imfazwe yombango, ibeka isigwebo esilawulayo iTokugawa shogunate malunga nalabo abafuna ukubuyisela amandla okwenene kwezopolitiko kumlawuli. Umlawuli waseMeiji osemncinci wayenenkxaso yamandla aseChosu naseSatsuma, ayenemikhosi embalwa kakhulu kune-shogun, kodwa izixhobo ezininzi zanamhla.
Emva kokulwa okunzima kumhlaba naselwandle, i-shogun yayiphendule kwaye umphathiswa wezempi we-shogunate wanikela ngo-Edo (eTokyo) ngoMeyi ka-1868. Noko ke, amaqhosha e-shogunate enyakatho yelizwe aphelelwe inyanga ezininzi. Enye yeemfazwe ezibalulekileyo malunga nenkohlakalo yokubuyisela iMeiji , eyayinamaqela amaninzi amabhinqa, yayiyimfazwe yaseAyizu ngo-Oktobha noNovemba ka-1868.
Njengoko intombi kunye nomfazi wabaphathi be-shogunate e-Aizu, i-Yamakawa Futaba baqeqeshwe ukulwa kwaye ngenxa yoko baye bathatha inxaxheba ekukhuseleni iNqaba yeTuruga ngokumelene nemikhosi kaMlawuli. Emva kokungqingwa kwenyanga, i-Aizu yanikezela. Ama-Samurai ayo athunyelwa kwiinkampu zemfazwe njengeembopheleleko kwaye izikhundla zabo zahlula kwaye zaphinde zafakwa kwiindawo zokunyaniseka. Xa ukukhuseleka kwenqwelomoya kwaphulwa, abaninzi abakhuseli benza i- seppuku .
Nangona kunjalo, i-Yamakawa Futaba yaphila kwaye yaqhuba ukuqhuba imoto yokuphucula imfundo yabasetyhini kunye namantombazana aseJapan.
Yamamoto Yaeko: I-Gunner e-Aizu
U-Yamamoto Yaeko (1845-1942), owalwela njengomkhweli ngexesha lokukhusela i-Aizu e-Warhin (1868-9). ngokusebenzisa i-Wikipedia, ummandla woluntu ngenxa yobudala
Omnye wabasemagunyeni base-Aizu abadlali be-Samurai bawase-Yamamoto Yaeko, ababehlala ngo-1845 ukuya ku-1932. Uyise wakhe wayengumfundisi we-gunmany for the daimyo ye-domain ye-Aizu, kwaye umfana uJaeko waba ngumqhubi onamandla kakhulu phantsi koqeqesho lukayise.
Emva kokutshatyalaliswa kokugqibela kwebutho le-shogunate ngowe-1869, u-Yamamoto Yaeko wathuthela eKyoto ukunyamekela umntakwabo, u-Yamamoto Kakuma. Wathinjelwa ngumzalwane waseSatsuma kwiintsuku zokuvala zeVihin War kwaye ngokuqinisekileyo wayefumana unyango olubi ezandleni zabo.
U-Yaeko wabuya waba ngumguquleli ongumKristu waza watshata ngumshumayeli. Wayehlala kwiminyaka eyi-87 ubudala kwaye wancedisa ukufumana iYunivesithi yaseDoshisha, isikolo samaKristu eKyoto.
Nakano Takeko: Umbingelelo we-Aizu
Nakano Takeko (1847-1868), inkokheli yombutho wesigorha wesibini ngexesha leMfazwe yaseBoshin (1868-69). ngokusebenzisa i-Wikipedia, ummandla woluntu ngenxa yobudala
Ummeli wesithathu we-Aizu nguNakano Takeko, owayehlala ubomi obutshanje ukususela ngo-1847 ukuya ku-1868, intombi yesinye isigosa sase-Aizu. Wayeqeqeshelwa ubugcisa be-karate waza wasebenza njengomqeqeshi ngexesha lasemva kweentshumi.
Ngexesha leMfazwe yaseAyizu, uKanano Takeko wahokela iqela lamaSamamu amabhinqa ngokumelene nemikhosi yamaKumkani. Walwa ne-naginata, isixhobo senkcubeko yokukhetha abafazi baseJapan abafazi.
UTotko wayekhokela intlawulo ngokumalunga nemikhosi yemikhosi xa wayithatha ibhokhwe kwisifuba sakhe. Ukwazi ukuba uya kufa, umfana oneminyaka engama-21 ubudala wayala udadewabo uYuko ukuba amnqume intloko aze ayisindise kwiintshaba. UYuko wenza njengoko wacela, kwaye intloko kaNukoano Takeko yangcwatywa phantsi komthi,
Ukubuyiswa kwe-Meiji ka-1868 eyabangela ukuphumelela koMlawuli kuMbindi waseBoshin wabonisa ukuphela kwexesha lemamurai. Kodwa ekugqibeleni, ama-Samurai abesifazana abanjengoNakoano Takeko balwa, banqoba baza bafa ngokukrakra kunye kunye nabafana babo.
Imbali yamandulo yaseGrike: uCassius Dio
Heroes Revolutionary of Philippines
Ahmad Shah Massoud | Inkunzi yePanjshir
Kumkani noKumkani obizwa ngokuba "Omkhulu"
Ngaba i-Merlin ikhona?
UJeremiah O'Donovan Rossa
Imbali ye-Picts Tribe yaseScotland
Iinguqulelo zaseRussia ze-1917: Ukuvukela kwangaphambili
UC Santa Cruz GPA, SAT, kunye ne-ACT Data
Iilwimi ezisetyenziswe kwiGadi
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya: iMfazwe yaseQuebec (1759)
Umbulali: uJerry Lee Lewis
I-MÜLLER Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Ungenalutho iNdebe yakho
Kutheni Ubunokuthi Umntu Oyedwa Afune Ukufumana Umntu Osileleyo?
Ngaba Amabhinqa Ayahlukahluka?
Indlela Yokusinda I-Blizzard
I-Salarios promedio y trabajos en cruceros en Estados Unidos
I-Bogotazo: I-Legendary Riot yaseColombia ye-1948
Yiyiphi i-Guitar engcono kubaqalayo: I-Acoustic okanye yamandla?
Uthando lweVenus Capricorn Ukuhambisana
Uguquko oluvela kuBobby Zimmerman ukuya kwiNkcukacha yeBantu uBob Dylan
Iphepha leMpahla: iMicrosoft Magic
Ixabiso leKholeji lininzi kangakanani?
Ukuhlelwa koMthendeleko we-Woodstock ka-1969
Uluphi Uhluko phakathi kweqela eliLawulayo kunye neLawulayo?
Indlela yokusebenzisa iiSpeffixes zaseNtaliyane
Ngena kwiNyanga kwiAries
Iingcamango ezingcono zokuxhaswa kweeNgxowa-maKristu zokuThunywa kweeNtsha
I-Best Anime Heroines
'Maka iBhola' kwaye 'Ukumakisha ibhola leGalofu'